ကျွန်မရဲ့အစားထိုးမရပါသောဖေဖေ (Lut Latt Soe) | MoeMaKa Burmese News & Media
လွတ်လပ်စုိုး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်၊ အောက်တိုဘာ ၄၊ ၂၀၁၂
အဲဒီနေ့က…အတိအကျပြောရရင်၂၅.၉.၁၂နေ့လယ်၃နာရီမှာဦးနုရဲ့တာတေစနေသားစာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲကနေပြန်လာပြီးခနနားရေချိုးပါတယ်။ပြီးတာနဲ့မေးလ်တွေစစ်ပါတယ်။ ဗိုက်ဆာတယ်ဆိုလို့ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပေးတာ ကိုမြေးအဖိုး၂ယောက် အတူတူလုစားနေကြပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ဖေဖေတူအရင်း ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်ကြီးကို သွားဖတ်ခိုင်းဦးမယ်ဆိုပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲထွက်သွားပါတယ်။ ကျွန်မလဲအေးအေးလူလူကျန်ခဲ့တာပါ။
၆နာရီလောက်မှာအိမ်ရှေ့ကတံခါးခေါက်သံကြားလို့ထွက်ကြည့်တော့ဖေဖေရယ်….။ကျွန်မကခပ်အေးအေးပဲဘာတဲ့လဲဖေကြီးလို့မေးလိုက်ပါတယ်။ဖေဖေက မဖြေပဲ ကျွန်မအမျိုးသားပြန်လာပြီလားလို့ မေးပါတယ်။လာနေပြီ လမ်းထိပ်ရောက်နေတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ ဖေက ပိုက်ဆံအံဆွဲလေးဆွဲဖွင့်ရင်းက အခုချက်ချင်း `အနိုင်´ (အသည်းအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းနိုင်) ဆီသွားလို့ `အတိုး´(ဓာတ်မှန်ပါရဂူကြီး) ကပြောတယ်။ဖေကြီးဓာတ်မှန်မှာ CA လိုပေါ်နေတယ်တဲ့။ကျွန်မချက်ချင်းပဲထုံသွားပါတယ်။
မယုံနိုင်ပါဘူး။ကျွန်မတွေ့တာတော့ဖေကြီးရဲ့အဆုတ်ဘယ်ခြမ်းမှာအဖြူကွက်ကြီးတွေ့တာပဲ ဖေကြီးကို မောင်လေးအကြီးတုန်းကလို ရေ၀င်နေတာနေမှာပါလို့တောင် ပြောမိသေးတယ်။
ကျွန်မအမျိုးသားရောက်လာတော့ကားမောင်းပို့ပြီး၂ယောက်သားထွက်သွားကြတယ်။ ကျွန်မချက်ချင်း အကိုတ၀မ်းကွဲဓာတ်မှန်ပါရဂူဆီဖုန်းဆက်ပါတယ်။သူ့အတွေ့အကြုံအရ၇၀ရာနှုန်းသေချာတယ်ပြောပါတယ်။ online ကနေတဆင့်စင်ကာပူရောက်နေတဲ့အမအကြီးနဲ့မောင်အကြီးဆီ message ပို့တယ်။ပဲခူးရောက်နေတဲ့ မေမေ့ဆီ ဖုန်းဆက်တယ်။ ကျွန်မခေါင်းထဲမှာ ထုံနေတယ်။ ငိုရမှာလား မငိုရဘူးလား မဝေခွဲတတ်ဘူး။ ဟုတ်ကော ဟုတ်ရဲ့လား။ဓာတ်မှန်ပေါ်မှာ တခုခုများဖုံးအုပ်မိသွားသလား… ဆေးများကွက်နေရော့သလား။ အရူးတယောက် လိုလျှောက်တွေးနေမိတာနော်။ လက်မခံချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပေါ့လေ။
ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကချက်ချင်းပဲ CT Scan ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။အာရှတော်ဝင်မှာရိုက်တဲ့ CT result ကိုညတွင်းချင်းအကိုဓာတ်မှန်ပါရဂူကဖတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်မဆီ၊ဖေကြိးဆီဖုန်းဆက်ပါတယ်။မကြားချင်တဲ့အဖြေကိုသေချာသိရပါပြီ။
နောက်တနေ့မနက်၂၆.၉.၁၂အသည်းဆေးရုံမှာအကိုဆရာဝန်ထံဖေကြီးမေနဲ့ကျွန်မချီတက်ကြပါတယ်။အကိုကသေချာရှင်းပြပါတယ်။စင်မှာသွားထပ်စစ်ဖို့ ပိုသေချာအောင် လုပ်စရာရှိတာမြန်မြန်လုပ်ဖို့……. စီစဉ်ရပါပြီ။ အမြန်ဆုံးသွားဖို့ရယ်၊ အမြန်ဆုံး check up လုပ်နိုင်ဖို့ရယ်။ အမ booking လုပ်ထားတဲ့အတွက် Lung & Chest Specialist ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ Mount.E Hospital မှာပြသဖို့ ၁.၁၀.၁၂ကို ချိန်းထားပါတယ်။ အကုန်ပြန်စစ်ပါတယ်။ အဆုတ်ထဲကနေ biosy ယူပါတယ်။ CT ပြန်ရိုက်ပါတယ်။
နောက်တနေ့၂.၁၀.၁၂မှာတကိုယ်လုံး CT ဆေးအခေါ်က PET လို့ခေါ်တာနဲ့ brain mri ရိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့၃.၁၀.၁၂မှာတော့ ဆရာဝန်ကြီးဆီမှာ ဆေးစစ်ချက်တွေပြန်ပြရပါတယ် ။ဖေဖေ့အကျိတ်ကခွဲလို့မရနိုင်ကြောင်းနဲ့ ဦးခေါင်းခွံနားမှာပြန့်နေတဲ့ ဆဲလ်တချို့တွေ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ကီမိုသွင်းဖို့စပြီးစီစဉ်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မနက်မှာ first cycle ကီမိုသွင်းပါမယ်။ ၁၁ရက်မှာ second cycle သွင်းပါမယ်။ အဲဒီနောက်တော့မြန်မာပြည်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
ဖေဖေဟာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းထောင်ထဲကို၃ကြိမ်တိုင်တိုင်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုစာအတွင်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ဖူးပါတယ်။ကျွန်မတို့အံကြိတ်ခဲ့ရတဲ့နေ့တွေဟာ ကျွန်မအသက်၁၈နှစ်မပြည့်ခင်ထဲကပါ။ အခုကျွန်မအသက်၄၁နှစ်ရှိပါပြီ။ တိုက်ပွဲတွေကမပြီးသေးဘူး ဆိုတဲ့သဘောလား။ ခန နားထားတဲ့ တိုက်ပွဲကိုပြန်တိုက်ခိုင်းတာလား။
အဖေဆိုတာသက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတအနေနဲ့ပါဆယ်ပစ္စည်းများကို `လက်ခံရရှိပါသည်င်ဝံသ´ ဆိုတဲ့မော.. ရှေ့က မတပ်ထားတဲ့ ဖေဖေ့ လက်မှတ်လေးတခုထဲနဲ့ ကျွန်မတို့အားတင်းခဲ့ရတာ ငါးနှစ်တိတိကြာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါနောက်ဆုံးအခေါက် အဖမ်းခံရတုန်းကပါ။ပြန်ထွက်လာတော့ ဖေဖေ့သားတွေက အရပ်တွေရှည်နေလွန်းလို့ဖေကြီး ကမော့ကြည့်ရင်း သဘောတွေကျလို့လေ။
ကံကြမ္မာရဲ့စိန်ခေါ်မှုကဒီတခါတော့တော်တော့်ကိုရက်စက်ဆိုးဝါးလွန်းပါတယ်။ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့တိုက်မှာပါ။နိုင်သော်ရှိ မနိုင်သော်ရှိ ဘယ်တော့မှအလံမလှဲဘူးလို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါတယ်။
သစ္စာတွေလဲဆိုရလွန်းလို့အပ်ကြောင်းထပ်နေပြီ ။ ဖေဖေ့ကိုကိုယ့်အဖေဆိုတာအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် `မောင်ဝံသ´ဆိုတာရှိဖို့ လိုကိုလိုအပ်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက်မချိန်းထားပဲ စောစောလာစောင့်နေတဲ့အရာကို နဲနဲတော့ညှိနှိုင်းဖို့ လိုအပ်တယ်မဟုတ်လား။ ဘာပဲပြောပြောဖေဖေ့ရဲ့ facebook မှာဝိုင်းအားပေးကြသူများကြောင့် ကျွန်မတို့အားတက်ရပါတယ် ။ဖေဖေ့ကိုအားပေးကြပါ။ ဖေဖေဟာ သူတပါးကို ဘယ်တော့မှချောက်မတွန်းခဲ့ဖူးသူ၊ မကောက်ကျစ်ခဲ့ဖူးသူ၊ သိပ်ကိုရိုးစင်းလွန်းသူပါ။သူ့ကိုဆော်နေမှန်းသိတဲ့သူကို အေးအေးလူလူစကားထိုင်ပြောနိုင်သူပါ။ကျွန်မတို့က ဖေဖေ့နောက်ကနေ ဒေါသတွေ တငွေ့ငွေ့ထွက်နေ ရင် ဖေဖေက “သမီးကနိုင်ငံရေးသမား၊ သတင်းစာဆရာသမားသမီး၊ မပီသသေးပါလား။ အရေမထူပါလား …” နဲ့ ဆုံးမနေကျပါ။
အနီးကပ်နေတဲ့ကျွန်မဟာဖေဖေ့စိတ်ကိုနေ့တိုင်းဖတ်နေရပါတယ် ဒီတလော ဖေဖေ နဲနဲပိန်လာတာ အလုပ်ပင်ပန်းလို့ပဲ ထင်ပြီးပေါ့ဆခဲ့မိတဲ့ကျွန်မကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်တော်ခွင့်မလွှတ်ချင်ပါဘူး။ ဖေဖေက သိပ်လဲအိပ်ရေးပျက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ညဘက် ၂နာရီ ၃နာရီမှ အိပ်ပေမယ့် မနက်ခင်း ကျွန်မတို့သားအမိနဲ့ မေမေ့အတွက် breakfast ကိုကိုယ်တိုင်ဝယ်ပေးပြီးမှ ပန်းကန်တွေထဲ အဆင်သင့်ထည့်ပေးပြီးမှ ၀ါသနာစေတနာတွေကြောင့် အခမဲ့ဖွင့်ထားတဲ့သူ့သင်တန်းလေးကိုသွားနေကျပါ။
(ဓာတ်ပုံ၊ မိုးမခ၊ ဆရာမောင်ဝံသနှင့် ၂၀၁၀၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၅က အယ်လ်အေမြို့တော်မှာ ဆုံတွေ့ခဲ့စဉ်က ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်)
7 Responses to ကျွန်မရဲ့အစားထိုးမရပါသောဖေဖေ (Lut Latt Soe)
Pwint Kyaw on October 4, 2012 at 1:48 pm
susan on October 5, 2012 at 11:50 am
ဆရာ ကျန်းမာပါစေ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ လို.ဆုတောင်းပါတယ်
chit hmu on October 5, 2012 at 3:15 pm
He isagreat and sincere man.
chawsu on October 5, 2012 at 4:56 pm
မြန်မာစာပေလောကမှာရှားပါးတဲ့လူတစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရတဲ့ ဆရာကြီး ယခုတိုက်ပွဲကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ပါစေ။
sawmoemyint on October 5, 2012 at 9:07 pm
we are praying for his recovery.
may saya maung wuntha live long and write more for the younger generations.
HTUNAUNGKYAW Mdy on October 6, 2012 at 10:32 pm
ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒိံစာကိုဖတ်မိတဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကျွန်တော့်အမေလည်းထိုင်းကဘာမွန်လှဆေးရုံမှာကင်ဆာရောဂါနဲ့ ဓါတ်ရောင်ခြည်ကုသမှုကိုခံယူနေရတယ်လေ။ဆရာရော အမေပါအမြန်ကျန်းမာပြိံးအသက်ရာကျော်ရှည်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
areporterinexile on October 6, 2012 at 11:46 pm
ဆရာမောင်ဝံသ မကျမ္မာဘူးဆိုတာသိရလို့၊ အလွန်ဘဲစိုးရိမ်မိပါတယ်။ ဆေးကုသရေးအတွက် ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုတာကြားရလို့၊ စာဖတ်ပရိဿတ်ယောက်အနေနဲ့ တတ်နှိုင်သမျှကူညီသွားဘို့လဲ ဆုံးဖြတ်မိပါတယ်။ ကျန်ဆရာမောင်ဝံသရဲ့စာဖတ်ပရိဿတ်များကလဲ ဆရာမောင်ဝံသဒီတိုက်ပွဲ ကို ကျော်လွှားနှိုင်အောင်ပံ့ပိုးကြစေကြောင်း တိုက်တွန်းယင်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။